Ngwa kacha mma Bitcoin Wallet Maka Ggba chaa chaa n'ịntanetị - latabernasanlucar.com
Ngwa kacha mma Bitcoin Wallet Maka Ggba chaa chaa n’ịntanetị
Bitcoin, ihe ngọngọ nke dabeere na cryptocurrency, abanyela ụwa nke ịgba chaa chaa n’ụdị afọ ndị gara aga. Mgbe ndị egwuregwu Bitcoin mbụ bidoro, ụlọ ọrụ ntanetị n’ịntanetị malitere ịmalite itinye ụzọ nkwụnye ego dị iche iche na weebụsaịtị ha, na-enye ndị ịgba chaa chaa ohere iji ndị ahụ na-egwu ụdị egwuregwu dị n’ịntanetị, site na oghere na poker. Ugbu a, dị ka Bitcoin na-esi n’ike si n’ike gaa ike, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-agba chaa chaa n’ịntanetị abụghị nanị Bitcoin dị ka nhọrọ ịkwụ ụgwọ iji nye, kamakwa ha na-agụnye oriri nke ndị ọzọ na-ewu ewu.
Iji malite ịnụ ụtọ uru niile nke ịgba chaa chaa Bitcoin, onye ọkpụkpọ egwu ga-enwe obere akpa Bitcoin nke na-abịa n’ụdị 2, onye nlekọta ma ọ bụ onye na-elekọtaghị ya.
Obere akpa Bitcoin
Wallets Custodial bụ ụdị obere akpa ego, njikwa nke a na-enye onye nke atọ. Nke a pụtara na ibu ọrụ ịchebe Bitcoins gị dị na ubu nke onye na-elekọta gị, mgbanwe mgbanwe crypto na-ejide igodo nzuzo gị. Ọ dị nnọọ mfe ịtụkwasị obi na nchekwa Bitcoin gị na ụdị nzukọ a dịka ọ na-atọhapụ gị na ọrụ iji nweta mkpuchi gị. Iji maa atụ, jiri obere akpa ndị ọzọ, ọ bụ ọrụ gị icheta igodo nke onwe gị dị ka a ga-asị na ndị ahụ efunahụ gị, ị gaghị enwe ike ịnweta ego gị. Site na obere akpa, n’aka nke ọzọ, ndị ọrụ ndị ọzọ ga-ejide n’aka na ị nwere ike iweghachite paswọọdụ obere akpa gị n’oge ọ bụla ma ọ bụrụ na ịchefuru ya.
Dịka ọmụmaatụ, Coinbase bụ nke ụdịrị obere akpa ego Bitcoin. Ọ bụ ezie na ọ bụ ikpo okwu a tụkwasịrị obi ịzụta na inweta Bitcoins, iji Coinbase maka ebumnuche ịgba chaa chaa bụ azụmaahịa aghụghọ. Isi okwu a bụ na obere akpa ego dị ka Coinbase ga-agbaso iwu ịgba chaa chaa, nke pụtara na obere akpa gị nwere ike mechie ma ọ bụrụ na ị jiri ya iji zipu ego na ebe nrụọrụ weebụ cha cha. Ohere inweta bụ na a gaghị ejide gị na ịme ụdị azụmahịa a, mana ịchọrọ n’ezie itinye ihe egwu na-egbochi ma hapụ ego gị?
Ego obere akpa Bitcoin
A na-ahụta obere akpa na-abụghị ndị nlekọta dị ka nhọrọ nchekwa maka ịchekwa ego gị crypto jiri ya tụnyere obere akpa ego. Nke a bụ n’ihi na naanị gị nwere ohere gị onwe igodo. Ọzọkwa, naanị gị na-ahụ maka icheta igodo gị na idobe ego gị.
N’ịgba chaa chaa, ọ kacha mma iji ụdị obere akpa anaghị echekwa maka na ha nyere gị nnwere onwe karịa etu esi eji ego gị. N’okpuru ebe a, anyị depụtara ụfọdụ ngwa obere akpa Bitcoin kacha mma ị nwere ike iji mgbe ị na-agba chaa chaa na cha cha cha cha.
Ikekwe ngwa akpa akpa Bitcoin kachasị ewu ewu, Mycelium ebipụla maka ndị ọrụ gam akporo. Na nnukwu interface, obere akpa na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịchekwa, zipu, ma ọ bụ nweta ego. Ọ na – enyekwa gị ohere itinye ego cha cha na Bitcoin, na – enweghị ndị ọzọ na – egbochi gị iji ego gị maka ebumnuche ịgba chaa chaa. Iji budata ngwa Mycelium, gaa Google Play.
Na Mycelium, ị nwekwara ike ijikwa ego ole ị kwụrụ ma a bịa n’ụgwọ. A na-ahapụ gị ịhọrọ ego ga-adịrị gị mma, nke bụ akụkụ ọzọ dị ukwuu nke obere akpa a.
Blockchain.info dị adị kemgbe 2011 ma mara ya dị ka obere akpa Bitcoin kachasị wee tụkwasị obi n’ebe ahụ. Ọ dakọtara na ekwentị gam akporo na iOS. Ihe mgbakwunye agbakwunyere bụ na enwere ike ibudata ngwa ahụ na desktọọpụ gị.
Dịka ọ bụla eji eme obere akpa ngwa ngwa Bitcoin, Blockchain.info na-enye gị ohere ịchịkwa ego mkpuchi gị.
Breadwallet enwetawo aha dị ka obere akpa Bitcoin tụkwasịrị obi nke nwere interface dị mfe iji. Nke ahụ kwuru, ikpo okwu ahụ zuru oke maka iji, ịzụrụ, na ijide Bitcoin maka ndị ọhụrụ na ụwa crypto. Ọ bụ ezie na Breadwallet bụ ọnụma niile na ndị na-ejide ekwentị smartphone, ọ na-agbakwa ọsọ zuru oke na Android smartphones.
Na obere akpa a, ọ dịghị onye dị n’etiti gị crypto na gị, nke pụtara na azụmahịa gị enweghị ike igbochi nyocha.
Airbitz bụ obere akpa Bitcoin ọzọ enwere ike ịtụkwasị obi ma jiri ya maka azụmaahịa ịgba chaa chaa. Inye nnukwu ahụmịhe onye ọrụ, Airbitz bụ usoro ikpo okwu ọhụụ ọhụrụ. Na mgbakwunye, ọ na-akwado ọtụtụ altcoyins, dịka Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple XRP, na ọtụtụ ndị ọzọ.
N’ihe banyere nchekwa, Airbitz na-arụ nnukwu ọrụ na ịchekwa ego gị oge niile, yana-eji nyocha ihe abụọ maka ebumnuche nchebe ọzọ. Retain jigide njikwa zuru oke na igodo nzuzo gị, na-eme Airbitz nnukwu nhọrọ maka ndị na-achọ ngwa ngwa akpa ego echekwara.
Electrum dị gburugburu kemgbe 2011 ruo ugbu a, ọ nwere ọmarịcha usoro. Obere akpa a jikọtara ya na iOS na gam akporo smartphones ma dakọtara na ngwanrọ na desktọọpụ gị.
Ọ bara ọgaranya na atụmatụ, gụnyere nchekwa oyi, ma a na-agagharị ngwa ahụ n’ụzọ dị mfe, yabụ Bitcoin newbies agaghị ahapụ ịkọcha isi ha otu esi eziga ego site na akaụntụ Electrum ha na saịtị ịgba chaa chaa. Bitcoin-lekwasịrị anya, ikpo okwu anaghị akwado ọ bụla ọzọ.
Prediksi Pertandingan Bola Tangan Putra Prancis vs Jerman Olimpiade 2020